Nezvedu - Shenzhen Alphagreen vape Co., Ltd.
Kuti ushandise iyo Alphagreenvape webhusaiti iwe unofanirwa kunge uine zera 21 makore kana kupfuura. Ndokumbira utarise zera rako usati wapinda saiti.
Ndine makore 18 kana kudarika
Ndiri pasi pemakore gumi nemasere
Ndine urombo, zera rako haritenderwe
Shenzhen Alphagreen vape Co., Ltd yakatangwa muna 2018 inova inogadzira hunyanzvi mukutsvaga, kusimudzira uye kugadzirwa kweVape Hardware. Isu tiri muSenzhen, iine nyore kutakura kuwana. Zvese zvigadzirwa zvedu zvinoenderana nemhando yepamusoro yemhando uye zvinokosheswa mumisika dzakasiyana siyana pasirese.
Tine vashandi vanopfuura makumi mashanu, nhamba yegore negore yekutengesa inodarika madhora makumi maviri nemana emadhora. Zvivakwa zvedu zvakashongedzerwa uye kugona kwekunaka kwemhando yepamusoro pamatanho ese ekugadzira zvinotigonesa kuvimbisa kugutsikana kwevatengi.
Nekuda kwezvinhu zvedu zvemhando yepamusoro zvigadzirwa uye nekunze kumira kwevatengi sevhisi, isu takawana wepasirese kutengesa network kunosvika kuNorth America neEurope.
Isu tiri vane simba, vadiki, uye vane chinzvimbo timu.
Chinangwa chedu ndechekuti "Funga Zvakakura, Be Excellent." Pinza mazano matsva, zvakanyanya kudzora mhando, yakazara chigadzirwa yekutevera sevhisi. Tinoda kuvaka win-win mamiriro uye kugadzira ramangwana rakajeka
Isu tinobata mutengi wese nekushinga kwedu uye kuvimbika, tarisa mutengi wese seshamwari yedu inodikanwa.
Isu takatsunga kushandisa zvemhando yepamusoro zvigadzirwa kugadzira zvigadzirwa zvedu, 300k cartridges uye 200k inoraswa peni pamwedzi, gara uchigamuchira mhinduro yakanaka kubva kune vatengi.
WEDZA ZVIDZIDZO ZVEDU
Zvinangwa Zvedu Zvekugadzira NdezveEgonomic,
utsanzi, Inoshanda, Uye Zadzisa Zvinodiwa zveVatengi.
Runhare:: +86 13559135783
Adress:5th Floor, No.3 Kuvaka, Ji An Tai Industrial Park, Tian Fu Road, Bao'an District, Shenzhen, China
© Copyright - 2010-2021: All Rights Reserved. Zvinowanikwa Zvigadzirwa, Sitemap, CBD vape chinyoreso, bhatiri vape chinyoreso, kuraswa vape chinyoreso, rechargeable vape peni, CBD mafuta vape kuraswa, 510 bhatiri, Zvese Zvigadzirwa